Vaovao - Ny famonoana ny fantsona vita amin'ny vy sy ny fitsaboana hafanana dia matetika ataon'ny hafanana fampidirana
Ny famonoana ny fantsom-bozaka vita amin'ny fantsona sy ny fikolokoloana ny hafanana dia matetika amin'ny alàlan'ny fanafanana fampidirana na fanafanana ny lelafo. Ny masontsivana ara-teknika lehibe dia ny hamafin'ny faritra, ny hamafin'ny toerana ary ny halalin'ny sosona fanamafisana mahomby. Ny fanandramana ny hamafana dia afaka mampiasa tester ny hamafin'ny Vickers, afaka mampiasa Rockwell na hamafin'ny Rockwell. Ny safidin'ny herin'ny fanandramana (mizana) dia mifandraika amin'ny halalin'ny sosona mafy orina mahomby sy ny hamafin'ny fantson-drano fantsona. Eto dia misy hamafisana telo.
Toetoetran'ny simika: fanoherana ny hafanana avo, fanoherana ny hafanana ambany, fanoherana asidra, alkalinity, fanoherana oksidasi sns.
Fampisehoana dingana: famolavolana filamenta, fizahana ny vaky, famerenana miverimberina, fanodikodinam-bola, fisolokiana miverimberina, torsion roa-lalana, fitsapana hydraulic, fitsapana flaring, famoritana, crimping, fisaka, fanitarana peratra, famelarana peratra, Organisation microscopy, fitsapana cupping, fandalinana metallographic, sns .;
Fitsapana tsy manimba: fitiliana tsy-manimba taratra taratra X, taratra elektrônetika elektrônika, ultrasonika, fanandramana amin'izao fotoana izao, fitsapana ny fivoahan'ny tsiranoka mahery vaika, fitsapana lalina
Toetoetran'ny mekanika: tanjaka mahery, fitsapana ny fiatraikany, teboka azo, elongation aorian'ny fivakisana, fihenan'ny faritra, index henjana (Hamafin'ny Rockwell, hamafin'ny Brinell, hamafin'ny Vickers, hamafin'ny Leeb, hamafin'ny Webster);
Zavatra hafa: rafitra metallographic, fampidirana, sosona decarburized, famaritana votoatin'ny mikraoba, famakafakana ny antony, ny haben'ny voam-bary ary ny naoty mikroskopika, ny firafitry ny herinaratra ambany, ny harafesin'ny intergranular, ny mikraoba superallozy, ny rafitra metallographic avo lenta Miandry.
Fanadihadiana fampitahana, famaritana ara-pitaovana, famakafakana tsy fahombiazana, famakafakana singa, famakafakana simika
Famakafakana tsy fahombiazana: famakafakana vaky, famakafaka ny harafesina, sns.
Fanadihadiana ifotony: fahitana marina sy famakafakana ny manganese, oxygen, nitrogen, carbon, sulfur, silicon, iron, aluminium, phosphore, chromium, vanadium, titanium, varahina, kobalta, nikela, molibdenum, cerium, lanthanum amin'ny metaly, alloys ary ireo vokatra vokariny , ary vy vy, Kalsioma, manezioma, zinc, tin, antimony, arsenika ary singa vy hafa mifangaro sy ny atiny;